Salama daholo, niverina miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona iray ho anao rehetra izahay, izay fantatra amin'ny anarana hoe Sweet Crossing Snake IO Apk. Izy io dia rindrambaiko filalaovana Android, izay manolotra lalao miteraka antony tsotra. Lalao tsotra nefa mampiankin-doha izany. Mora ny milalao saingy sarotra ny manakana ny tenanao tsy hilalao azy.
Milalaova lalao Android dia iray amin'ireo fialamboly tsara indrindra hijanona ao an-trano sy hankafy. Noho izany, misy lalao an-jatony maro samihafa novolavolaina sy misy eny an-tsena. Toy izany koa, nitondra zavatra manokana taminao izahay, miaraka amin'ny fahalianana iray ihany, miverina miaraka amin'ity rindranasa ity izahay.
Tsy lalao mifototra amin'ny hetsika izany, fa hitan'ny mpilalao fa tena mifaninana izy io satria an-tserasera ihany koa. Noho izany, ny mpilalao hafa rehetra dia tena olombelona fa tsy bots. Betsaka ny mahafinaritra, azonao atao amin'ity fampiharana Android ity. Hizara ny endri-javatra rehetra isika ary koa momba ny lalao.
Ka raha te hahalala momba azy ianao dia alohan'ny hilalaovana azy. Afaka mijanona miaraka aminay vetivety fotsiny ianao dia hahita izany. Azonao atao koa ny misintona an'ity rindranasa ity amin'ity pejy ity ary raha manana fangatahana momba izany ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Topimaso momba ny Sweet Crossing Snake IO Apk
Izy io dia fampiharana lalao Android, izay novolavolain'i Moonton. Kilalao mahazatra izy io, izay azonao atao miaraka amin'ny namanao sy mpilalao tsy fantatra eran'izao tontolo izao. Amin'ity lalao ity dia misy karazana biby manintona samihafa, izay tena ampahany.
Ny mpilalao dia tsy maintsy misafidy ny iray amin'ireo endri-tsoratra misy mba hidirana amin'ny lalao. Rehefa tafiditra ao amin'ny Lalao 2D, ny biby hafa dia mihazakazaka eny amin'ny saha misy mba hihinana zava-mamy sy fananana hafa. Isaky ny mihinana sakafo dia hitombo ny rambon'ilay biby.
Tsy maintsy manala ny toetranao amin'ny biby lehibe hafa manana rambony lehibe ianao, satria raha mifandray amin'ny rambony iray hafa ianao dia ho very. Noho izany, amin'ny voalohany dia tsy maintsy milalao soa aman-tsara ianao ary mamonjy ny tenanao, afaka manafika biby kely hafa ianao.
Azo alaina ihany koa ny scoreboard, izay mampiseho ireo biby dimy voalohany an-tsaha. Ny dingana lehibe dia ny eo an-tampon'io lisitra io. Raha vantany vao tonga any an-tampony ianao dia mila milamina kokoa, satria ny mpilalao hafa rehetra dia te hampidina anao. Noho izany, ny fahatongavana any ambony sy hijanonana amin'ny laharana ambony no fomba lehibe indrindra.
Manome teboka ihany koa ny Sweet Crossing Snake IO, izay ahafahanao mamoha ireo endri-javatra sy fitaovana mahagaga. Misy hoditra misy, izay azonao sokajiana amin'ny alàlan'ny fanatratrarana ny haavony, fa afaka mandeha amin'ny alàlan'ny fijerena doka sasany ianao. Misy ihany koa ny rambony, amin'ny vidiny tena ambany. Noho izany, azonao atao ny manokatra azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Manolotra biby hafa koa izy io, izay azonao ovaina rehefa avy nandresy lalao maro sy namoha fanomezana sy loka. Noho izany, dia lalao mampientam-po. Arakaraka ny lalaovinao no hiezahanao hilalao. Noho izany, alaivo ity fampiharana ity ary manomboka milalao azy.
anarana Bibilava Miampita Mamy IO
Anaran'ny fonosana com.minigames.sweetcrossing
Raha nizara saika ny momba azy rehetra izahay, saingy misy maro hafa. Azonao atao ny mizaha fiasa bebe kokoa amin'ity rindranasa ity ary mizara izany aminay koa amin'ny alàlan'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany. Ao amin'ny lisitra etsy ambany dia hizara ny sasany amin'ireo lozisialy lehibe indrindra amin'ity rindrambaiko ity aminao rehetra izahay.
Manome fanomezana maimaim-poana ny doka
Misy tsaho momba ny Sweet Crossing Snake IO Mod Apk, saingy tsy hita eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Fa hiezaka ny hahazo izany haingana araka izay azo atao. Noho izany, mizara ny dikan-teny ofisialin'ity lalao ity aminareo rehetra izahay. Tsindrio fotsiny ny bokotra fampidinana azo alaina, ary hanomboka ao anatin'ny segondra vitsy ny fampidinana.
Sweet Crossing Snake IO Apk no lalao tsara indrindra tsy ho an'ny ankizy ihany, fa ny olon-dehibe koa afaka milalao izany sy mankafy azy io. Iray amin'ireo lalao tsara indrindra nilalao sy nankafiziko io. Ka sintomy ity lalao ity ary mahazoa fahafinaretana tsy voafetra.
Sokajy Games, Lalaom-pirahalahiana Tags Lalao 2D, Bibilava Miampita Mamy IO, Sweet Crossing Snake IO Apk, Sweet Crossing Snake IO App Post Fikarohana